Ungazenza njani izaziso ze-Instagram kwi-Android? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungazenza njani izaziso ze-Instagram kwi-Android?
Oktobha 25, 2020 0 IiCententarios 598
Ukuba ufuna ukwazi Ukwenza kusebenze izaziso ze-Instagram Ufikelele kwinqaku elibonisiweyo, apha siza kuchaza indlela yokwenza ngokukhawuleza.
Ngeli xesha, apho uthungelwano lwasentlalweni lwaba yinxalenye yobomi bethu bemihla ngemihla, kubalulekile ukuba uninzi lubazi abo bathumela abalandeli babo kunye neendlela zentsholongwane; ukuba ulapha kungenxa yokuba ungomnye wabo. Ke ngoko, ukuba unesixhobo se-Android, ukwenza izaziso zakho ze-Instagram kungumsebenzi olula kakhulu, kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Yiya kwiprofayile yomsebenzisi ofuna ukufumana kuye izaziso.
Phezulu uyakufumana "intsimbi" cofa apho kwaye iindlela ezahlukeneyo ziya kuvela: Ushicilelo, amabali kunye ne-Instagram TV.
Njengoko ubona, kulula kakhulu, nangona kunjalo, i-Instagram yindawo eguquguqukayo nenamandla yokunxibelelana kwezentlalo onokuthi uqwalasele izaziso zakho ngendlela ebhalwe ngokwakho, ejolise kukhetho lwakho kunye nomdla kuluntu lwakho.
Izaziso zomyalezo ngqo
Unokwenza okanye ungasebenzi ii-Dms okanye imiyalezo ethe ngqo kwizicwangciso zakho zeprofayili, ukuvumela ukuba ukhethe phakathi kwezaziso zomyalezo, izicelo zomyalezo, izicelo zeqela kunye neengxoxo zevidiyo. Ngexesha elizayo xa uzibuza Indlela yokusebenzisa izaziso zomyalezo kwi-Instagram sele uyazi ukuba unokhetho olwahlukileyo onokukhetha kulo.
Ngexeshana Yenza izaziso zamabali kwi-Instagram Thatha ingqalelo ukuba ukuba usebenzisa olu khetho kubasebenzisi abaninzi, ifowuni yakho ayinakuyeka ukungcangcazela okanye ukukhala, kuba amabali asesona sixhobo sisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi be-instagram. Ke ngoko, zama ukuyenza ngeakhawunti yomdla wakho omkhulu.
Ukongeza, unokwenza kusebenze izaziso zezithuba zokuqala kunye namabali abantu abajoyina i-Instagram yoluntu, ngaloo ndlela uhlala unolwazi ngokuqala kwayo.
Sebenzisa izaziso ze-Instagram kwikhompyuter yakho okanye kwi-pc
Ukuba ufuna ukugcina unolwazi ngayo yonke into eyenzekayo kwindawo ohlala kuyo ngelixa usebenza okanye usenza uphando ngento ethile, emva koko sebenzisa izaziso ze-Instagram kwikhompyuter yakho. Olona khetho lufanelekileyo kukukhuphela i-emulator esebenza njengomatshini obonakalayo kwikhompyuter yakho okanye kwi-pc.
Ngale nkqubo ungasebenzisa imisebenzi eyahlukeneyo ye-Instagram kwikhompyuter yakho, njengokuthumela iifoto okanye iividiyo, ukufikelela kumabali, ukufumanisa umxholo kwicandelo "lokuhlola", phakathi kweminye imisebenzi. Ke uya kusebenzisa izaziso zakho ngendlela efanayo naleyo ubuya kwenza ngayo kwisixhobo sakho se-Android.
Ndizisebenzisa njani izaziso ze-Instagram ukuba ndine-iPhone?
Uninzi lwabasebenzisi be-iOS baxele imicimbi ethile xa kuziwa sebenzisa izaziso ze-Instagram kwizixhobo zakho ze-iphone. Ukuba oku kuyenzeka kuwe, nantsi sichaza indlela yokusombulula le ngxaki. Qaphela la manyathelo:
Yiya kwiprofayile yakho kwaye ucofe imenyu ngasekunene phezulu.
Khetha useto kwaye uye kwizaziso.
Izinketho ezininzi ziya kuvela, khetha enye oyithandayo.
Ukuba emva kokugqiba la manyathelo awuziboni izaziso, zama ukukhipha kunye nokufaka usetyenziso kwakhona. Thatha ingqalelo ukuba uyilo lwenkqubo yokusebenza ye-iOS inemisebenzi eyahlukeneyo kunye neempawu, ukuba ungumsebenzisi omtsha, kufuneka uziqhelanise nazo.
Zithini izaziso zokutyhala?
Njengayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu, i-Instagram ifuna ukukugcina unolwazi ngazo zonke izehlo ezinokwenzeka, ngenxa yoku, izaziso ezityhalekileyo ziyilelwe, ezikwazisa xa umntu "ethanda" iifoto okanye iividiyo zakho, amagqabantshintshi okanye eqala ukukulandela. Ngamafutshane, zonke zizaziso zonxibelelwano nabanye abasebenzisi.
Ungazifumana kwimenyu "yezicwangciso" kwi "izaziso" ukhetho, apho unokukhetha ezo zinto zilungele oko ufuna ukufumana. Apha sikubonisa ngokweenkcukacha:
Izithuba, amabali kunye nezimvo. Apha ungakhetha izaziso zokuthandwa, iikhomenti, iithegi kunye namabali kwaye ukhethe phakathi kokufumana isaziso "sabantu obalandelayo" kunye "nawo wonke umntu".
Iiakhawunti ozilandelayo kunye nabalandeli. Ezi zizaziso ezijolise kubalandeli abatsha, izicelo zokulandela, izihlobo zikaFacebook (ukuba uneakhawunti zombini onxibelelwano) kunye nokukhankanywa kwabanye abasebenzisi kupapasho.
Imiyalezo ngqo. Ezi zaziso zikwazisa xa zikuthumele umyalezo wangasese, zikuthumela isicelo sokukuthumela umyalezo (oku kuya kuxhomekeka kuseto lwakho lwangasese), joyina ingxoxo yeqela okanye ingxoxo yevidiyo.
Iividiyo ezibukhoma kunye ne-Instagram TV. Ezi zaziso zikwazisa xa umntu omlandelayo eqala ividiyo ebukhoma, iividiyo zakho ze-IGTV sele zilayishiwe kunye nenani leembono esele zithathiwe ukuza kuthi ga ngoku.
Ukusuka kwi-Instagram. Isicelo sikwazisa ngemiyalezo onokuthi ungafundeki, iindaba zemveliso yevenkile kwivenkile, izicelo zoncedo kumncedisi kunye nokungena okungaziwayo. Kuyacetyiswa ukuba ube nezaziso zokugqibela ezisebenzayo, kuba zinxibelelene ngqo nobumfihlo nokhuseleko lweakhawunti yakho.
Misa kancinci izaziso zokutyhala
Kungenzeka ukuba awufuni kufumana naluphi na uhlobo lwesaziso kuba uxakeke kakhulu, unentlanganiso ebalulekileyo kwaye awufuni kuphazanyiswa okanye kuba ukhetha nje loo ndlela ukuze ufumane intuthuzelo enkulu.
Ukuba kunjalo, unokumisa kancinci ixesha elithile. Isicelo sikunika ukhetho lokuyenza ukusuka kwimizuzu eli-15 ukuya kwiiyure ezisi-8, nangona kunjalo, ukuba ufuna ukwandisa elo xesha, ngumcimbi wokukhetha inani leeyure ukuze uphinde uthule.
Fikelela kolu khetho kwimenyu yokuseta kwi "izaziso", ngezantsi nje "kwezaziso ezityhilayo" khetha "misa konke". Ukuba ujongana nokunxibelelana rhoqo olu khetho luya kukunceda kuloo mizuzu ufuna ukunqanyulwa ngokupheleleyo / a.
Ezinye iintlobo zezaziso ze-Instagram
I-Instagram yenza i-imeyile kunye nezaziso zeSMS zifumaneke kuwe njengohlobo lokuthengisa nge-imeyile ukwenza iingcebiso ngeemveliso ezintsha (izixhobo zokusebenza) kunye nokuthumela ulwazi malunga neendaba.
Isicelo sikwathumela izaziso "njengezikhumbuzi" zezaziso onokuthi ulinde kuzo njengemiyalezo ethe ngqo engafundwanga. Ukongeza koku, inethiwekhi yoluntu inokhetho lokukuthumela iindaba malunga nezikhalazo kunye nokwaphulwa kwemithetho yoluntu.
Sebenzisa ezi zaziso apha ngezantsi "kwezaziso zokutyhala", kwi "ezinye iintlobo zesaziso", apho uza kubona ukhetho "i-imeyile kunye neSMS". Ukuba ungomnye wabantu abangathandiyo ukugcwalisa i-inbox, kukhethwa ukuba ungazenzi ezi zaziso.
Njengoko ubona, i-Instagram iya kuhlala ifumana indlela yokuziqhelanisa kangangoko nesingqengqelo osebenzisa ngaso usetyenziso, yiyo loo nto ikunika ezi ntlobo zokhetho. Ngoku ukuba unolu lwazi, awusoze uphinde uphuthe nakweyiphi na into ekuhlaleni kwi-Instagram kwakhona.
Sikwacebisa ukuba sifunde amanqaku ethu Ungayithumela njani i-Instagram kwi-PC yakho, iifoto kunye nokunye?
1 Ungazenza njani izaziso ze-Instagram kwi-Android?
1.1 Izaziso zomyalezo ngqo
1.2 Izaziso zebali
2 Sebenzisa izaziso ze-Instagram kwikhompyuter yakho okanye kwi-pc
3 Ndizisebenzisa njani izaziso ze-Instagram ukuba ndine-iPhone?
4 Zithini izaziso zokutyhala?
4.1 Misa kancinci izaziso zokutyhala
5 Ezinye iintlobo zezaziso ze-Instagram
Oktobha 25, 2020
Uyenza njani ingqalelo yokubamba i-Instagram?
Iinkqubo ezi-6 zokwenza umxholo we-Instagram onyanzelisayo